कोरोना उपचारमा शतप्रतिशत सफल डाक्टर, जसले ६९९ बि’रामीको सफल उपचार गरिसके – Butwal Sandesh
कोरोना उपचारमा शतप्रतिशत सफल डाक्टर, जसले ६९९ बि’रामीको सफल उपचार गरिसके
काठमाडौं। कोरोनाभाइरस सं क्रमण विश्वव्यापी म’हामारीको रुपमा फैलिइरहेका बेला एक डाक्टरले आफूले शतप्रतिशत सफलतापूर्वक ६९९ बि’रामीको उपचार गरेको बताउँदै आफूले प्रयोग गर्ने औषधीको खुराकबारे महत्वपूर्ण जानकारी दिएका छन् । उनले आफूले शतप्रतिशत सफल उपचार गर्नको लागि हाइड्रोक्सिक्लोरोकिन सल्फेट, जिंक र एजिथ्रोमाइसिन (जेड–प्याक) प्रयोग गरेको जानकारी दिएका छन् ।
न्यूयोर्ककका बोर्ड सर्टिफाइड फेमिली प्राक्टिसनर डा. भ्लादिमिर जेलेन्कोले ३५० कोरोनाभाइरस सं क्रमितको सफल उपचार गरेपछि एक साताअघि गत बुधबार उनको सफलताको कथा टेकस्टार्टअप्समा प्रकाशित भएको थियो । अहिले उनको नयाँ खुलासा पनि टेकस्टार्टअप्समै प्रकाशित भएको हो । त्यसपछिको एक हप्ताको अवधिमा उनले पुनः त्यति नै संख्यामा थप सफल उपचार गरिसकेका छन् । यसका लागि उनले विभिन्न औषधीहरुको मिश्रण प्रयोग गर्छन् ।
डा. जेलेन्कोका अनुसार उनले यो उपचारपछि सास फेर्ने समस्यामा ४ देखि ६ घण्टापछि सुधार भएको देखेका छन् । अहिले डा. जेलेन्कोले ६९९ बि’रामीको सफल उपचार गरिसकेपछि आफ्नो उपचार पद्धतिबारे थप अपडेट उपलब्ध गराएका छन् । न्यूयोर्ककका पूर्व मेयर रुडी जिउलिनीसँगको एक अन्तरवार्तामा डा. जेलेन्कोले आफ्नो पछिल्लो अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । उनको पछिल्लो अध्ययनमा उनले उपचार गरेका बि’रामीमध्ये ६९९ बि’रामीको सफलतापूवृक निको भएका छन्, एक जनाको पनि मृ त्यु भएको छैन, एक जनालाई पनि कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराउनु परेको छैन र मात्रै ४ जना अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
डा. जेलेन्कोका अनुसार यो पूरै उपचारको लागि मात्रै २० डलर लाग्छ । उपचारको लागि ५ दिनको समय लाग्छ र यसले शतप्रतिशत ठिक उपचार हुन्छ । उनले आफ्नो सफलतालाई ‘मृ त्यु नहुनु’को रुपमा परिभाषित गर्छन् । डा. जेलेन्कोले पहिलोपटक गत हप्ता एक फेसबुक भिडियोमार्फ राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘पूरै देशलाई यो औषधी सेवन गर्न सुझाव दिन’ आग्रह गरेका थिए ।
हाइड्रोक्सीक्लोरोकिनले उपचारमा सफलता पाएका अन्य घटनाहरु पनि छन् । गत हप्ता न्यूयोर्कको लेनोक्स हिल हस्पिटलका अंकोलोजिस्ट डा. विलियम ग्रेसले पनि यौ औषधीका कारण आफ्नो अस्पतालमा एक जनाको पनि मृ त्यु नभएको बताएका थिए । नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको एक अध्ययनले पनि डा. जेलेन्कोको नतिजालाई पुष्टि गर्छ ।